ETU ESI EBUDATA VIDIYO REDDIT NA ỤDA (2021) - ADỤ
Etu esi ebudata vidiyo Reddit na ụda
N'ime ụwa dị iche iche na nkewa, Reddit na-eme ka ndị mmadụ nọ n'otu obodo. Ngwa mgbasa ozi mmekọrịta na-enye gị ohere ijikọ ndị ọrụ ndị ọzọ nwere mmasị ndị yiri ya, na-enye gị ohere nchekwa ịkekọrịta echiche na ọdịnaya gị. Dị ka o kwesịrị ịdị, ị na-echekarị vidio na onyonyo tosiri ka ọtụtụ elele. Ezie na ị nwere ike mfe ịzọpụta foto site na iji nseta ihuenyo, na nbudata vidiyo bụ a ubé mgbagwoju anya usoro. Ọ bụrụ n’ịchọta otu nsogbu ahụ, ị ​​nọ n’ebe kwesịrị ekwesị. Anyi ewetara gi ezigbo ndu ga-akuziri gi esi budata vidiyo Reddit na ụda.
Usoro 1: Jiri Reddit ChatBot iji chekwaa vidiyo
Usoro 2: Jiri SoundCloud gaa MP3
Usoro 3: Jiri RedditSave iji budata vidiyo
Usoro 4: Jiri Viddit Video Downloader maka gam akporo
Method 5: Jiri KEEPVid Online Video Downloader
ChatBots na Reddit bụ bọọlụ AI na-atọ ọchị nke na-enyere gị aka ịme ihe n’elu ikpo okwu. Site na ịkwado dị ka nkwado ndị ahịa na nbudata vidiyo, Reddit bots nwere usoro aghụghọ ole na ole. Nwere ike ibudata vidiyo na Reddit site na iji u / SaveVideo bot:
njehie koodu 0x80073cf9 windo 10 ụlọ ahịa
1. Banye na Reddit na imeghe post nke nwere vidiyo ịchọrọ ibudata.
2. Enweta na Tinye a ikwu na pịnye gị / SaveVideo.
3. Biputere okwu ahụ ma chere maka sekọnd ole na ole.
4. Kpatụ na mgbịrịgba akara ngosi na akuku aka nri nke ihuenyo iji gaa na peeji ngosi.
5. Gị / SaveVideo ChatBot kwesịrị ịzaghachi na okwu gị. Enweta na ngosi gaba n'ihu.
6. will ga-ahụ a njikọ agbakwunye na okwu gị. Kpatụ ya iji gaa na peeji nke nbudata vidiyo.
7. Họrọ ogo nbudata nke vidiyo ma chekwaa ya na ngwaọrụ gi.
SoundCloud ka MP3 bụ otu n'ime ndị kacha mma free Reddit video Downloaders online. Reddit vidiyo nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na enweghi ederede ọ bụla na faịlụ ebudatara. SoundCloud ka MP3 nwere ike idozi okwu a.
1. Banye na Reddit na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ site na ngwa na chọta post ị chọrọ ibudata.
2. Pịa na Kee ma họrọ Detuo njikọ.
desktọọpụ windo njikwa elu CPU
3. Gaa na ihe SoundCloud ka MP3 weebụsaịtị na ihe nchọgharị gị.
Anọ. Tapawa njikọ dị na ogwe ederede enyere na pịa bọtịnụ na-acha odo odo.
5. Ikpokoro ga-amata faịlụ gị ma budata ya na ngwaọrụ gị.
otu esi edozi windo 10 mmalite nsogbu na 2018
RedditSave bụ otu n'ime ndị na - ebudata vidiyo vidiyo Reddit kachasị ewu ewu ma dịkwa mfe iji. Reddit na-amata weebụsaịtị ma na-enyefe gị / SaveVideo ChatBot iwu ka RedditSave:
1. Followinggbaso usoro ndị a kpọtụrụ aha n’elu, detuo URL ahụ nke post ịchọrọ ibudata.
2. Gaa na ihe RedditSave weebụsaịtị na ihe nchọgharị gị.
3. Tapawa njikọ na ederede ederede efu na pịa na-acha akwụkwọ ndụ download bọtịnụ.
4. Ibe ohuru ga emepe emepe nwere njikọ nbudata maka vidiyo a. Dabere na mmasị gị, ị nwere ike budata vidiyo na HD ma ọ bụ SD mma.
5. Pịa na bọtịnụ ibudata iji chekwaa vidiyo vidiyo na PC gị.
Ọzọkwa Gụọ: Etu esi ebudata vidiyo na esemokwu
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Reddit enweela mmetụta dị ịrịba ama na ikpo okwu gam akporo. Ngwa mgbasa ozi ọha na eze nwere ihe karịrị nde 50 na Storelọ Ahịa Play na akara nke 4.5 kpakpando. Mgbe ị nwere ike iji weebụsaịtị ndị a kpọtụrụ aha n'elu iji budata vidiyo, ngwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma. Site n'iji ngwa Viddit, ị nwere ike ibudata vidiyo Reddit na gam akporo na ụda.
1. Mepee Playlọ Ahịa Google ma chọọ Viddit - Ihe nbudata vidiyo.
2. Download ngwa gị gam akporo ngwaọrụ.
windo 10 kwalite osisi na 99
3. Mepee ngwa Reddit na ịnyagharịa post ị chọrọ ibudata.
4. Kpatụ na Kee bọtịnụ n'okpuru post.
5. Pịgharịa site na nhọrọ nhọrọ na Viddit na mgbata.
6. Chere maka sekọnd ole na ole mgbe Viddit na-amata vidiyo.
7. Kpatụ na Download ịzọpụta video na ngwaọrụ gị.
KEEPVid bụ ihe ọzọ a tụkwasịrị obi ma dị irè video Downloader na-azọpụta Reddit vidiyo na ngwaọrụ gị.
1. Banye na Reddit na chọta ebe vidiyo ị chọrọ ibudata.
2. Jiri njikọ njikọ ma ọ bụ URL adreesị mmanya na detuo njikọ ahụ.
3. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke Jide vidiyo nbudata .
4. Tapawa njikọ na ederede ederede ma pịa Gaba.
5. Chere maka sekọnd ole na ole ka ebe nrụọrụ weebụ na-agbanwe njikọ ahụ na vidiyo na-ebudata.
6. Pịa na Download HD Video iji chekwaa vidiyo Reddit na ụda.
mee google chrome ngwa-ngwa windo 7
Q1. Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na vidiyo anaghị ebudata kama ọ na - egwu kama?
Mgbe vidiyo malitere igwu kama ibudata, ọ na-abụkarị nhụchalụ nke faịlụ ahụ. Na smartphones, kpatụ ma jide vidiyo wee pịa nhọrọ nbudata nke gosipụtara. Na desktọọpụ desktọọpụ, pịa aka nri na vidiyo wee pịa Chekwa Video Dị ka. Kpọọ faịlụ ahụ wee pịa Chekwaa ka ibudata ya na PC gị.
Q2. Vidiyo Reddit ebudatara enweghị ụda, gịnị kpatara ya?
Na Reddit, vidiyo ole na ole nwere ụda ọ bụla. Imirikiti n'ime ha bụ gifs ma ọ bụ ihe eserese nwere naanị foto. Agbanyeghị, ọ bụrụ na vidiyo nwere ụda, gbalịa ibudata ya na ndị na-ebudata ihe ntanetị dị ka RedditSave.
Wzọ 5 iji dozie Steam na-eche Egwuregwu na-agba ọsọ
Etu esi ebudata vidiyo sitere na weebụsaịtị
Etu esi edozi ụdaolu ederede na gam akporo
Etu esi atụle faịlụ na folda abụọ na Windows 10
Anyị nwere olile anya na ntuziaka a nyere aka ma nwee ike budata vidiyo Reddit na ụda . Mee ka anyị mata usoro nke rụụrụ gị ọrụ kacha mma. Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ọ bụla gbasara edemede a, nweere onwe gị ịjụ ha na ngalaba nkọwa.
ọrụ ibipụta na-anọ n'ahịrị mgbe ha bipụtara windo 10
a ngwa na-egbochi shutdown windo 10
akara ngosi wifi anaghị egosi windo 10
wepu rụọ ọrụ windo 10 watermark regedit
esi gbanyụọ touchpad mgbe a na-agbanye òké
android nwere ike t download mms